त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठानको आफ्नै भवन बन्ने, दाता अधिकारीद्धारा गैँडाकोट ५ मा जग्गा सहयोग
By administrator on	 January 29, 2021 देश, फोटो फिचर, साहित्य, स्थानीय
गैँडाकोट, माघ १६ । त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान नवलपरासीले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने भएको छ । गैँडाकोट ५ मा जग्गाधनी ऋषिराम अधिकारीले जग्गा उपलब्ध गराएसँगै भवन निर्माण गर्ने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. नारायणप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।
सचिवालय, सभाहल, पुस्तकालय र कला संग्रहालय रहने गरि भवन निर्माण गरिने परिषद्का सचिव गोविन्दराज बिनोदीले जानकारी दिनुभयो ।
गैंडाकोटमा गरिने हरेक साहित्यिक गतिविधि उक्त हलमा गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनेगरी परिषद्को भवनलाई साहित्य, कला र संगीतको त्रिवेणीका रूपमा संग्रहालय बनाइने उहाँको भनाइ । करिव १५ लाख रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
साहित्य, सङ्गीत र कलाको त्रिकोणात्मक विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले विगत तीन दशकदेखि त्रिवेणी साहित्य परिषदबाट नवलपरासी सक्रिय रहदै आएको छ । जिल्लामा क्रियाशील रहँदै आएको त्रिवेणी साहित्य परिषद २०७७ पुस १० देखि ’त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान’मा रूपान्तरण भएको थियो ।
उक्त प्रतिष्ठानलाई थप प्रतिष्ठित गराउँदै जानेक्रममा गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्वर ५ का वडाध्यक्ष नवराज कँडेल, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. नारायणप्रसाद खनाल, उपाध्यक्ष भीमप्रसाद शर्मा, सचिव गोविन्दराज विनोदी र कोषाध्यक्ष इन्द्रराज पौडेलको विशेष पहलमा दाता अधिकारीद्वारा गैँडाकोट ५ को कुसुमघाटको नदीकिनारमा सो जग्गा उपलब्ध गराइएको हो ।
हिजो जग्गा प्राप्त गरेर जग्गालाई तारबारले घेरेर सुरक्षा प्रदान गरिएको छ । साहित्य, सङ्गीत र कलाको साधनाका लागि अत्यन्त उपयुक्त वातावरण रहेको उक्त जग्गामा भौतिक संरचनाहरू निर्माणका लागि सबैका सहयोगी हातहरू फैलिए भवन निर्माणका लागि चाँडै काम सम्पन्न हुने प्रतिष्ठानले विश्वास लिएको छ ।कार्यक्रममा नवलपरासी र चितवनका स्रस्टाहरूको उपस्थिति थियो ।